Pfungwa wokurarama zvikwereti pakunogumira, kukarukureta nzira
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Pfungwa wokurarama zvikwereti pakunogumira, kukarukureta nzira
mu mutengi mari uye kadhi Boka kadhi, yakatogadzirwa anogara "chikwereti muganhu". Pamusoro kutambira zviri chikwereti akapfuudza chikwereti muganhu, kusvikira kunoderedza anowanika zvakanakanaka inotevera kwaizotevera muripo, iwe havazokwanisi kugamuchira chikwereti chitsva.
Kuwedzera kuti, panyaya apo nzira muripo muna wokurarama chikwereti, iwe uchava wakaiswa kuti "wokurarama chikwereti muganhu". Izvi inotsigirwa wokurarama zvikwereti, rinoreva kufadza mari. Mari kunobva kadhi, asi kana paine kunyange kana zviri akaenzana chikwereti muganhu, aonawo nyaya wokurarama chikwereti muganhu Inoshandiswawo yomukati puranga.
chikwereti muganhu uye wokurarama chikwereti muganhu ndiyo zvakaenzana, haufaniri zvakawanda zvinogona kupera pamwe chikwereti kana ukaisa mbiri muganhu pamusoro wako. Zvisinei, apo wokurarama chikwereti muganhu mu yomukati puranga yakatogadzirwa, uzive chikwereti muganhu uye wokurarama zvikwereti muganhu, ukuwo, unofanira kungwarira pachiyero.
bhuku | wokurarama zvikwereti chete kadhi
bhuku | iri akadai wokurarama chikwereti mashandiro pamwe kadhi
kutirambidza uwandu nomumwe kadhi basa mashoko, tapota kuenzanisa peji pamusoro apa.
Ngatimboonai muenzaniso chaiwo kwemutongo muganhu uye wokurarama chikwereti muganhu
Somuenzaniso, iwe kushandisa muganhu 500,000 Yen, ngavapfige uye kuva kadhi kuti ribonucleic muganhu 300,000 Yen. Muchiitiko chino, "zvichiita kuti chikwereti kusvika vaifanira kuti 500,000 Yen mune kadhi rimwe, kusvikira 300,000 Yen wavo anowanika mune wokurarama chikwereti" Achanzi.
3 Yen imwe-nguva muripo mumwedzi mumwe chete kadhi iri, kana kunotenga 5,000 Yen mu wokurarama chikwereti, chikwereti muganhu achava "500,000 Yen -3 Yen -5.000 Yen = 465,000 Yen". Kusiyana neizvi, wokurarama chikwereti muganhu ndiye "300,000 Yen -5.000 Yen = 295, Zvakaita 000 Yen ".
pfungwa kuti zvaida, inguva iyo kuti kusapfuudza wokurarama chikwereti muganhu. Zvinonzi nguva dzose zvinotsanangurwa mabhurocha uye yepaIndaneti pamusoro kadhi kambani asi, kakawanda nemari kupfuura wokurarama chikwereti muganhu, uchava "kwakauraya mune bundu pakuverengwa unotevera mwedzi."
kuramba kushandisa wokurarama chikwereti pasina Panyaya iyoyo, ngationei pakuenzanisa wokurarama mbiri mune muenzaniso pamusoro ndiko kunge akaita "320,000 Yen". Sonaruto, kuwedzera chemhosva ane dzose wokurarama zvikwereti, hatina kumbofungidzira inotevera mwedzi "20,000 Yen ane ribonucleic muganhu zvakawandisa" vachaparadzwa mhosva.
Naizvozvo, kuti kushandisa vakaronga kadhi, kunzwisisa pachiyero zvimwe ndiyo inokosha. Sezvo wokurarama mbiri zvikuru vachichengeta kuwira mamiriro ezvinhu akadai "Handizivi kana uchinwa zvikuru pashure zvose", verenga Specification mumwe mwedzi, achava kukosha kuti munogara kuziva pakuenzanisa panguva padariro kushandiswa.